8 Qodob oo Fure u Ah Helitaanka Wax Akhrin Nacfi badan | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Saddexda Heerar Ee Istaraatijiyadda Ganacsigaada |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, July 3, 2016
Badweynta Murugada – “Lax walba shilalka ay isdhigto ayaa lagu qalaa.”
Waa Maxay Cudurka Kansarka ‘cancer’?
Raxma Cali Yuusuf, April 10, 2018
Waa Maxay Maansada Soomaaliyeed, Ma Gabay Mise Waa Geeraar? ||Tukesomalism.com
Usama Cismaan, February 11, 2016
Cabdiqani Qorane Cismaan — September 22, 2019
Wax akhrisku waa sheyga ugu muhiimsan ee hab dhaqanka iyo hab fikirka qofka wax weyn ka qaata kana caawiya inuu qofkani hadhow wax ikhtiraaci karo, anba uu qof kan oo dhan noloshiisa wax ka baddalo.
Waad la socotaa in ayaaddi koobaad ee nabigeena udgoon kuso dagtaa ahayd إقرأ oo macnaheedu yahay akhri, may ahayn صل oo tuko ah anba soonba balse waxey ahayd wax akhri, faa,idada wax akhrisku waa wax macluum ah oo la isla wada garanayo runtii.
Balse anigu xagan waxan kaga hadli doona inaga oo soo kobaya, Bal sidee ayaa loo akhriyaa buuggaagta aad cilmiga ka faa’ideysid. Markaa adaa soo akhrinsan doona bugaagtaase.
Hadaba iga gudoon sideedan qodob ee ugu muhimsan.
Inaad wax kasta iska akhrido, waxay ka dhigan tahay inaad hesho aqoon dusha sare un ah oo aan meel fog gaadhsiisneyn, mararka qaar waxaa la sheegaa inaaney jahliga wax dhaamin wax akhrinta noocaas oo kale ah, waxaase wax aad u wanaagsan in uu qofku xoogga saaro akhrinta takhasus goonni ah oo 70% uu ka miro dhaliyo, inta soo hartayna uu kaga faa’ideysto takhasusyada kale ee uu doonayo inuu wax ka ogaado.
Haddaba mawduucan waxaan ku eegayna sida looga nacfiyo wax akhtirnta iyo wadada ugu wanaagsan ee loo maro wax akhrin nacfi badan oo si weyn looga faa’ido.
U Deji Istiraatiijiayd Wax Akhrintaada, Waxaad kala saaraysaa muhiimaadaha iyo howl tabannada sida ay ukala horreeyaan, tusaale;
Barashada Culuumta diiniga ah ee Waajibka ah ee nolosha howlmaalmeedkaaga cibaado lagama maarmaanka u ah.
Culuumta takhasuska kuu ah.
Culuumta kale ee ay wanaagsan tahay inaad wax ka ogaato.
Maaddo kasta inta aadan akhrin ka hor, danta aad ka leedahay is hordhig, sida: inaad su’aal iska weyddiiso jawaabtana aad ka baadigoobto buugga aad akhrineyso.
Yacni waa inaad aadan intaad aanad buuga bilaabin ujeedo da aad u akhriyeyso aad garaneysid hadaad iska akhrido oo aadan garaneynba waxaad akhridey iyo wax aanad akhriyin oo haddey kalmad aad hore u aragtey kaaso hor baxdo aad garaneysid hadaad garan weydo waa Ayaan darro.
Markaa inagoo soo koobeyna oo sharaxaad fara badan ka bixineyn waa inaad danta aad ka leedahay waxaad akhriyeysid oo aadan iska akhriyiyuun.
Buugaagta ha u akhrin si isku mid ah, Buug kasta marka aad ka gaarto danta aad nacfi ahaan uga baahneyd, khasab kuguma aha inaad wada dhameyso.
Rogrog safxadaha buugga aad akhrineyso, si aad u qiimeyso cinwaannada aad u baahan tahay, inta aadan u gudogeln wax akhrinta, waxaad si wanaagsan u eegtaa hordhaca iyo tusmada buugga, adigoo wax iska weydiinaya muhiimadda uu buugani kuu leeyahay iyo sida aad uga faa’ideysan karto, taas oo ku xiran kolba nooca buugga ee aad akhrineyso.
Waxa jira buugaag fara badan oo aad iyo aad ufiican oo akhriskooguna muhiim kuu yahay. Adiguna dee waa inaadaan dhagax noqonin ee aad waxa faa’idada kuu leh iyo waxa aan faa’idada kuu lahayn aad sifiican ukala saareysid.
Buuga aad jeceshey inaad akhridana cid kuuma sheegeyso oo adaa garanaaya.
Waxaa kugu filan inaad akhriso hordhaca,gabagabada mowduuc kasta iyo Jumladda ugu muhiimsan ee baaragaraafyada.
Si aan si wanaagsan uga faa’ideysanno kadib marka aan buugga si wanaagsan urogrogto, waxaa inoo suurogaleysan in nafteennu ku raaxaysato waxa ay akhriyayso. Marka aad akhrido muwduucyada uu ka koobanyahay buugu waxa inoosoo baxaaya waxeynu uga baahanahay ineynu si fiican udhugano oo u akhrino.
Waxbaa yaan hadal idinku daaline waa inaad adigu tusmada buuga kala soo dhex baxdo mawduuca aad aad ugu baahantey ee lagama maarmaanka kuu ah adiga.
6.Wax ku akhri il furan oo noqo qof aan loo dusin karin caadooyin iyo dhaqan ay ummado kale leeyihiin, ka fogow in caqliga lagaa qabsado, ma aha inaad ra’yi kasta oo qoraagu leeyahay uu ku saxan yahay, waa inaad ogaataa wax kasta oo mabaadi’daada aad aaminsan tahay ee saliimka ah ka soo horjeeda uu yahay wax aan la aqbali karin, ciddii doontaba hakuu sheegto, adigoo mar kasta iska eegaya waxa aad akhrineyso cidda qortay iyo sida loogu kalsoonaan karo.
Oo aad is waafajiso waxa uu qoraagu qorey iyo adigu waxaad aaminsantey amba dee ay is khilaafaan oo dee mar kasta khasab maaha in aad is waafaqtaan waxan uu qoraagu kuu sheegayo laga yaaba in waxa aad aaminsantahay uu 100% ka saxsantey.
Waxyaabaha aad garan weydo Calaamadee, si hadhow ay kuugu sahlanaato inaad si dhib yar u fahmto.
Inta aad wax akhrineyso ha isku dayin inaad wax kasta fahamto isla markiiba, waxa aad fahmi waydo calmadayso, hadhow marka aad buugga dhameyso isku day wixii aad garan weyday inaad fahamto adigoo la kaashanaya cidda kale ee kaaga aqoonta badan. Waa dhibaato hadaad is tidhaahdo fahan marka 1aad ee aad akhriyeyso buuga amba xiisad aadi loo dhignaayo ha ahaate iyadoo xiisad lagu jiro hadaad isku mashquuliso hal erey, tobn eraybaa kuu dhaafayee la soco.
Faaidooyinkaaga Buugga meel iskugu gee si hadhow aad ugu nacfiso.
Markasta qalinku hakuu dhawaado si aad u qorato waxyaabaha faa’idada gaarka ah kuu leh, iskugu gee meel goonni ah oo u qoro si adiga kuu gaarka ah oo aad fahmi kareysid.
Siddeedaa qodob ee aan soo sheegey oo kaliyaa maaha ee waxa jira qaar intaa ka badan oo aanan xaggan ku qorin balse aan anigu si kooban usheegey. Adiga qudhaadu ku darso oo ka fikir waxyaabaha aad isleeday akhriskaaga tayo ayay uyeelayaan. Intaas ayaan kaga baxayaa mawduucii wax akhriska ahaa.
Tags: 8 Qodob oo Fure u Ah Helitaanka Wax Akhrin Nacfi badan
Next post Muhiimadda Wax Akhrisku Ku Leeyahay Islaamka
Previous post Isbeddel Keen - Haddii Aad Nolosha Isbeddel ka Doonneysid Waxaan Dadku Raadin Raadi